अन्यथा भोलि पुनः विद्रोह जन्मन सक्ने खतरा रहन्छ:-शरण कुमार अर्याल « Nepal Bahas
अन्यथा भोलि पुनः विद्रोह जन्मन सक्ने खतरा रहन्छ:-शरण कुमार अर्याल
प्रकाशित मिति : २२ पुष २०७८, बिहीबार १३:०४
(शरण कुमार अर्याल शिक्षााविद हुन् । राजनीतिक परिवारमा जन्मे हुर्केका उनी शैक्षिक जगत् र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रबाट नै व्यक्ति परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास बोकेका उनी विद्यालय व्यवस्थापनमा पनि संलग्न छन् । विभिन्न पत्रपत्रिकामा शिक्षा सम्बन्धी कलम चलाइरहने शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक/विद्यार्थी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा बोलिरहने अर्यालसँग नेपालबहसका प्रधानसम्पादक इन्द्र रिजालले गरेका कुराकानीका केही अंश)
प्रश्नः राजनीतिक परिवारमा जन्मेको हुर्केको, विद्यार्थी जीवन र पछिसम्म पनि राजनीतिमा सक्रिय तपाई अहिले शिक्षा क्षेत्रमा रमाइरहनुको कारण के होला ?
⇒ हो, म (स्याङ्जा, जैसीडाँडाको ) राजनीतिक परिवारमा जन्मेको र सोही वातावरणमा हुर्केको व्यक्ति हुँ । मेरो हजुरबुबा एकनारायण अर्याल र हजुरआमाहरुले स्याङ्जा जिल्लामा धेरै सामाजिक काम गर्नु भएको थियो । मेरो बुबा गेज शर्मा अर्याल, माइलो बुबा शोभाकान्त अर्याल र सानो बुबा जगतबन्धु अर्यालको स्याङ्जा जिल्लामा सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक योगदान ठूलो छ । उहाँहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाउनु भएन, आयआर्जन र जीविकोपार्जनको माध्यम ठान्नु भएन । बरु राजनीतिलाई समाजसेवा र रुपान्तरण गर्ने साधनको रुपमा लिनु भयो । आफ्नाे पैतृक सम्पत्ति सकेर राजनीति गर्नु भयो ।
मेरो बुबा गेज शर्मा अर्यालले (बीपी कोइरालाको डायरी २००८ देखि २०१३ सम्ममा समेत चर्चा गरिएको छ) वि.सं. २०१० सालदेखि नै शैक्षिक सुधार (मातृभूमि माध्यमिक विद्यालयलगायत धेरै विद्यालयको स्थापना), सामाजिक सुधार (बाहुनले हलो जोत्ने कामको स्याङ्जा जिल्लामा सुरुवात), आर्थिक सुधार (सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरूमा बस चलाउने, जैसीडाँडामा ठूलो तेल चामल पिन्ने मिसिनको स्थापना, सुन्तला तथा अन्य फलफूल बगैँचाको निर्माण), राजनीतिक सुधार (सानो उमेरमा नै बीपी कोइरालाको सामिप्यमा रहेर स्याङ्जा जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण) को नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने काका र माइलो बुबाले जनप्रतिनिधिको रुपमा विभिन्न पदमा बसेर लोकप्रिय कार्यहरु गर्नु भएको थियो ।
समग्रमा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालय नतिजा दिन पछाडि पर्नुमा अघि मैले भने झैं सरकारको दृढ इच्छाशक्तिकै अभाव हो । सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बढी सहजकर्ता कम हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ, जुन आरोप निजी विद्यालयका शिक्षकहरुमा कम छ
त्यसै गरेर पाहुनाहरुलाई ताउलामा खाना पकाएर खुवाउँदाको खुशी आमाहरुको अनुहारमा देखेको हो मैले । त्यो पारिवारिक वातावरणले मलाई राजनीति समाज रुपान्तरणको साधन हो तर कमाइ खाने व्यवसाय होइन भन्ने सिकाएको थियो । त्यसैले विद्यार्थी हुँदा कहिले नेतृत्वमा रहेर त कहिले नरहेर पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मन, वचन र कर्मले नै सक्रिय रहें । प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना पश्चात राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत बनेर करिब ८ वर्ष राष्ट्र सेवा गरें । माओवादी द्वन्द्वकालमा आत्मरक्षाका लागि जागिर छाडेर अमेरिका गएँ । त्यसको २ वर्षपछि नै नेपालमा शान्तिवार्ता सम्पन्न भई संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पारेर नेपाल आएँ र शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वलाई नै सकरात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर यसैमा क्रियाशिल छु यद्यपि राजनीतिबाट टाढा छैन । म शिक्षा क्षेत्रमा नाम र दाम कमाउन नभै शैक्षिक रुपान्तरणका लागि लागेका हुनाले रमाइरहन सकेको हुँला ।
प्रश्नः नेपालको शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिले गर्दा बिग्रेको हो भन्दछन् , यसमा तपाईको विचार के छ ?
⇒ नेपालको शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, अधिकांश क्षेत्र दलीय राजनीतिको चरम प्रभावबाट मुक्त छैनन् । मानिस विवकेशील र चेतनशील प्राणी भएका नाताले विचार शुन्य त हुन सक्दैनन् । कुनै न कुनै विचारबाट प्रभावित हुनु र चुनावका समयमा आफ्नाे मताधिकार प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । तर यहाँ त कर्मक्षेत्रमा पनि दलीय कार्यकर्ता कै रुपमा प्रस्तुत हुनु, दलको झण्डा बोक्नु दुर्भाग्य भयो । जसका कारणले प्रजातन्त्र र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनापछि पनि नेपालले अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न नसकेको यथार्थता हामी सबैले महसुस गरेकै विषय हो ।
प्रश्नः शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनले विद्यार्थीको सिकाइ स्तर निकै कमजोर देखिन्छ । किन होला ?
⇒ सन् २०११ मा गरेको अध्ययनको तुलनामा केही सुधार भएतापनि सन्तोषजनक अवस्था छैन । नेपाली विषय बाहेकका विषयमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको सिकाइ स्तर निजी (संस्थागत) विद्यालयको भन्दा तल छ । वास्तवमा यो चिन्ताको विषय पनि हो । भनिन्छ– सामुदायिक विद्यालयमा धेरै शिक्षक अभाव छन् । कतिपय विद्यालयमा विषयगत शिक्षक छैनन् । यसको प्रभाव पनि होला । यद्यपि सरकार वा राज्यको दृढ इच्छाशक्तिको कमीले नै शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन भन्ने लाग्दछ । विद्यार्थीहरुको सिकाइ स्तरमा परिवर्तन ल्याउन तिनै तहका सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, विद्यालय तथा सरोकारवालाहरुले ठोस पहल थाल्नु पर्दछ ।
प्रश्नः सामुदायिक र संस्थागत (निजी) विद्यालयहरु बीचको असमानताका बारेमा उल्लेख गर्नु भयो । लगानीका दृष्टिकोणले निजी विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा धेरै छ तर नतिजा उल्टो किन होला ?
⇒ हजुरले गहन प्रश्न उठाउनु भयो । सरकारको ठूलो लगानी भएर पनि सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयको तुलनामा राम्रो (गुणस्तरीय) शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको जनगुनासो छ । यद्यपि कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले कतिपय निजी विद्यालयहरुले भन्दा राम्रो (गुणस्तरिय) शिक्षा प्रदान गर्नु भएको छ । तर समग्रमा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालय नतिजा दिन पछाडि पर्नुमा अघि मैले भने झैं सरकारको दृढ इच्छाशक्तिकै अभाव हो । सामुदायिक विद्यालयका कतिपय शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बढी सहजकर्ता कम हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ, जुन आरोप निजी विद्यालयका शिक्षकहरुमा कम छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक समेत नगर्नु, संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पारित नहुनु, शिक्षा नीति २०७६ को कार्यान्वयनमा जोड नदिनु, तीनै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्न नसक्नु जस्ता विषयले मैले भनेका कुरालाई पुष्टि गर्दैनन् र ?
त्यसै गरेर आधुनिक शिक्षा प्रणाली, प्रविधिको प्रयोग, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मूल्याङ्कन प्रणाली, नवीन शिक्षण विधि र उपागमनको प्रयोगमा पनि सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयको तुलनामा पछि पर्नाले पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको पो हो कि ? तर एउटा कुरा इन्द्र जी समग्र शिक्षा क्षेत्रमा राज्य वा सरकारको लगानी एकदम कम छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन ।
प्रश्नः तपाईले शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुमा राज्य वा सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको अभावलाई प्रमुख कारकको रुपमा लिनु भयो । यसलाई अलि प्रष्ट पार्नुहुन्थ्यो कि ?
⇒ हो, राज्य वा सरकारको दृढ इच्छाशक्ति विना शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रको अपेक्षाकृत सुधार सम्भव छैन । तपाई नेपालको शैक्षिक इतिहास पल्टाएर हेर्नु भयो भने कुनै पनि कालखण्ड (२००७ अघिदेखि हालसम्म) मा पनि कुनै पनि सरकारले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाउनुहुन्न । विकसित राष्ट्रहरुले शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानेर अघि बढेको र यथेष्ट बजेट यस क्षेत्रमा विनियोजन गरेको पाइन्छ । तर नेपालमा सरदर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सार्वजनिक समेत नगर्नु, संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पारित नहुनु, शिक्षा नीति २०७६ को कार्यान्वयनमा जोड नदिनु, तीनै तहका सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्न नसक्नु जस्ता विषयले मैले भनेका कुरालाई पुष्टि गर्दैनन् र ?
प्रश्नः प्रसङ्ग बदलौं – पढाइ र सिकाइमा के फरक छ र यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ ?
⇒ अर्को गहन विषयवस्तु उठाउनु भयो । हामी धेरैलाई पढाइ र सिकाइ एउटै कुरा हुन भन्ने लाग्दछ । साधारण अर्थमा त्यसरी बुझ्न अन्यथा नहोला तर पढाइ र सिकाइमा धेरै समानताका बीच फरक पनि छ भनेर बुझ्न मात्र सक्यौ भने पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।औपचारिक शिक्षाले प्रमाणपत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्याङ्कन जस्ता पढाइमा जोड दिन्छ भने अनियमित वा अतिरिक्त शिक्षाले सिकाइलाई जोड दिन्छ । जीवनउपयोगी शिक्षाका सन्दर्भमा पढाइ भन्दा सिकाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि जीवनमा औपचारिक शिक्षाको ठूलो महत्व छ ।
शिक्षक विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सुविधा, अवसर र वातावरणमा पनि ठूलो खाडल महसुस हुन्छ । नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान भएकाले राष्ट्र सोही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ । अन्यथा भोलि पुनः विद्रोह जन्मन सक्ने खतरा रहन्छ ।
आधुनिक शिक्षा प्रणालीले औपचारिक शिक्षामा प्रगतिशील शिक्षा (प्रोग्रेशिभ एजुकेशन) मा जोड दिनुको प्रमुख कारण नै ज्ञान र सीपको विकासलाई समान्तर रुपमा अघि बढाउनु रहेको पाइन्छ । यसलाई कसरी जोड्ने भन्ने सवालमा शिक्षा के का लागि भन्ने विषयसँग गाँसेर हेर्नु पर्दछ । यदि शिक्षालाई प्रमाणपत्रको प्राप्तिको रुपमा मात्र नलिइ जीवनलाई सरल, सहज र खुशी बनाउने प्रक्रियाको रुपमा बुझ्न सक्यौं भने पढाइ र सिकाइ आफै जोडिन आइपुग्दछ । वास्तवमा पढाइ र सिकाइलाई एक सिक्काका दुई पाटाको रुपमा लिई ज्ञान र सीप प्राप्तिलाई समान्तर रुपमा अगाडि बढाउन विद्यालयहरु अग्रसर हुनु पर्दछ ।
प्रश्नः तपाई शिक्षक प्रशिक्षण, अभिभावक अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु लिएर काठमाडौं उपत्यका बाहिर गाउँतिर पनि पुग्नुहुन्छ । के फरक पाउनुहुन्छ ?
⇒ वास्तवमा नेपाल बुझ्न गाउँघर पुग्नु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्र (खासगरी काठमाडौं उपत्यका) बीचको असमानताको दुरी बढ्दो छ ।आर्थिक प्रगति, भौतिक विकास, सुविधा र सम्पन्नताको दुरी मात्र होइन सोच्ने र सपना देख्ने कुरामा नै आकाश जमिनको फरक छ । केही समय अघि म र श्रीमती एउटा कार्यक्रममा स्याङ्जा जाँदा अभिभावकसँग अन्तरक्रिया गर्दा अभिभावकहरुले आफ्नाे सन्तान (छोरा) हरु लाहुरे (भारतीय सेनामा भर्ति) भएको सपना पालेको बताउनु भयो, जुन कुरा शहरका अभिभावकहरुले सोच्न समेत चाहानु हुन्न । शिक्षक विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सुविधा, अवसर र वातावरणमा पनि ठूलो खाडल महसुस हुन्छ । नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख संविधान भएकाले राष्ट्र सोही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ । अन्यथा भोलि पुनः विद्रोह जन्मन सक्ने खतरा रहन्छ ।
प्रश्नः अन्तमाः शिक्षाको आगामी बाटो के हुनुपर्दछ ?
⇒ शिक्षाको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईकै लोकप्रिय अनलाइन सञ्चारमाध्याम नेपालबहसमा एउटा लामो लेख लेखेको पनि छु । मेरो विचारमा कोभिड–१९, अघि र पछिको शिक्षा एउटै रुपमा अगाडि बढ्नु सम्भव छैन । नेपालले कोभिड–१९ लाई शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि चुनौतिको रुपमा मात्र होइन अवसरको रुपमा पनि ग्रहण गर्न सक्नु पर्दछ ।
आगामी दिनमा तीनै तहका सरकार तथा सरोकार निकायहरुले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै माध्यमको रुपमा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग, बालकेन्द्रित सिकाइ प्रणालीमा जोड, पाठ्यक्रममा परिवर्तन, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जोड, नयाँ विधि, सिद्धान्त र उपागमनको प्रयोग, प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षालाई प्राथमिकता जस्ता विषयहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन नै आगामी शिक्षाका सही बाटो हुन् भन्ने लाग्दछ ।